သားသားမီးမီးလေးတှေ သှားကိုကျနလေား | Page3| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
သားသားမီးမီးလေးတို့အနနှေငျ့ အခြိုမြား အစားမြားခွငျး၊ သှားသနျ့ရှငျးရေး အားနညျးခွငျးတို့ကွောငျ့ သှားမှာရှိတဲ့ အပျေါယံကွှလှောတှငျ ပေါကျပွဲပကျြစီးခွငျး ဖွဈပျေါရာကနေ သှားပိုးစားခွငျး ဖွဈပျေါရတာ ဖွဈပါတယျ။ သှားပိုးစားခွငျးကနတေဈဆငျ့ သှားပိုးပေါကျနှငျ့ အခေါငျးပေါကျမြား ဖွဈပျေါလာစပေါတယျ။
>> ကလေးငယျမြားမှာ သှားပိုးစားခွငျးကို ဖွဈပျေါစတေဲ့ အကွောငျးရငျးမြား -
● သှားပိုးစားခွငျးဟာ ဘကျတီးရီးယားပိုးမြားနှငျ့ အခွားအကွောငျးရငျးမြားစှာကွောငျ့ ဖွဈပျေါရခွငျး ဖွဈပါတယျ။
● အခြိုနှငျ့ကစီဓာတျ မွငျ့မားသောအစားအစာတှေ သှားပျေါမှာ တငျကနျြရာကနေ သှားပိုးစားတာဖွဈတာမို့ ကလေးတှေ အလှနျနှဈသကျတဲ့ သကွားလုံး၊ ခြောကလကျ၊ ရခေဲခြောငျး၊ အခြိုရညျမြား၊ ပေါငျမုနျ့၊ နှားနို့ စသညျတို့ကို စားပွီးတိုငျးမှာ သှားသနျ့ရှငျးရေး ကောငျးစှာမပွုလုပျမိပါက သှားပိုးစားစတေတျပါတယျ။
● အဆိုပါအစားအစာမြားဟာ တံတှေး၊ အကျဆဈ၊ ဘကျတီးရီးရီးယား အစရှိသညျတို့နှငျ့ ပေါငျးစပျရာကနေ သှားပျေါမှာ သှားခြေးဖတျမြားကို ဖွဈပျေါစပေါတယျ။အခြိနျကွာတာနှငျ့အမြှ ဘကျတီးရီးယားမြားကနထှေကျတဲ့ အကျဆဈတှဟော သှားအပျေါယံမကျြနှာပွငျကို တိုကျစားခွငျးဖွငျ့ ပိုမိုကွီးမားတဲ့ သှားပိုးပေါကျတှကေို ဖွဈပျေါစတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
>> သှားပိုးစားခွငျးဖွဈစဖေို့ အလားအလာပိုမြားတဲ့ ကလေးငယျမြားကတော့ -
● ခံတှငျးမှာ သှားပိုးပေါကျဖွဈစမေယျ့ ဘကျတီးရီးရီးယားမြား စုပုံနသေူမြား
● အခြိုနှငျ့ကစီဓာတျ အစားမြားသူမြား
● ရသေောကျနညျးသူမြား သို့မဟုတျ ဖလူအိုရိုကျပါဝငျမှုနညျးသောရကေို သောကျလရှေိ့သူမြား
● တံတှေးအထှကျနညျးသူမြား စသညျတို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
● သှားနာတယျလို့ ပွောတာမြိုး
● အခြိုစာမြားစားတဲ့အခါ သို့မဟုတျ ပူသော၊ အေးသောအရညျမြား သောကျတဲ့အခါ သှားကဉျြတယျလို့ ပွောတာမြိုးရှိရငျတော့ သှားထဲမှာ သှားပိုးပေါကျတှေ ရှိနပေါပွီ။
>> သှားပိုးစားပွီး သှားကိုကျနရေငျ ...
● ပူလှနျးအေးလှနျးတဲ့ အစားအသောကျမြားကို မကြှေးပါနဲ့။
● ရနှေေးနှေးလေးထဲ ဆားကို လကျဖကျရညျဇှနျး တဈဇှနျးထညျ့ပွီး ပလုတျကငျြးပေးတာမြိုး လုပျပေးပါ။
● ပါးပျေါမှာ ရခေဲအိတျကပျပေးပါ။
● အကိုကျအခဲပြောကျပွီး အရောငျကစြတေဲ့ Paracetamol ပါဝငျတဲ့ဆေးရညျ (ဥပမာ - Biogesic for kids) တိုကျပေးလို့ ရပါတယျ။
● တကယျလို့ ဒီလိုဆေးတိုကျတာတောငျ ၂ ရကျ - ၃ ရကျနလေို့မှ မသကျသာရငျ သှားဆရာဝနျနဲ့ ပွသတိုငျပငျသငျ့ပါတယျ။
>> သားသားမီးမီးလေးတှေ သှားပိုးစားခွငျးမဖွဈအောငျ ဘယျလိုကာကှယျကွမလဲ?
● ကလေး သှားစပေါကျပွီဆိုတာနှငျ့ သှား စတငျတိုကျပေးပါ။ ဖလူအိုရိုဒျ ပါဝငျသော သှားတိုကျဆေးဖွငျ့ သှား၊ လြှာနှငျ့သှားဖုံးတှကေို တဈနနှေ့ဈကွိမျ တိုကျပေးပါ။
● အသကျ ၃ နှဈအောကျ ကလေးငယျမြားအား သှားတိုကျရာတှငျ ဆနျစအေ့ရှယျပမာဏခနျ့ရှိသော သှားတိုကျဆေးကို သုံးသငျ့ပွီး ၃ နှဈအထကျကလေးမြားကိုတော့ ပဲစအေ့ရှယျပမာဏကို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
● အသကျ ၂ နှဈနောကျပိုငျးကလေးမြားကိုတော့ သှားကွားထိုးသောခညျြမြှငျကို အသုံးပွုပေးနိုငျပါတယျ။
● ကလေးအား အခြိုမြားသောအစာမြားကြှေးခွငျးကို ကနျ့သတျသငျ့ပါတယျ။
● နို့ဘူးတိုကျသောကလေးမြားအား နို့ဘူးအတှငျး အခြိုရညျမြား ထညျ့တိုကျခွငျး ရှောငျပါ။
● ကလေးအား သှားဆရာဝနျနှငျ့ပွသပွီး သှားသနျ့ရှငျးရေး ပုံမှနျလုပျပေးပါ။
သားသားမီးမီးလေးတို့အနေနှင့် အချိုများ အစားများခြင်း၊ သွားသန့်ရှင်းရေး အားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် သွားမှာရှိတဲ့ အပေါ်ယံကြွေလွှာတွင် ပေါက်ပြဲပျက်စီးခြင်း ဖြစ်ပေါ်ရာကနေ သွားပိုးစားခြင်း ဖြစ်ပေါ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သွားပိုးစားခြင်းကနေတစ်ဆင့် သွားပိုးပေါက်နှင့် အခေါင်းပေါက်များ ဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။
>> ကလေးငယ်များမှာ သွားပိုးစားခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းများ -
● သွားပိုးစားခြင်းဟာ ဘက်တီးရီးယားပိုးများနှင့် အခြားအကြောင်းရင်းများစွာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
● အချိုနှင့်ကစီဓာတ် မြင့်မားသောအစားအစာတွေ သွားပေါ်မှာ တင်ကျန်ရာကနေ သွားပိုးစားတာဖြစ်တာမို့ ကလေးတွေ အလွန်နှစ်သက်တဲ့ သကြားလုံး၊ ချောကလက်၊ ရေခဲချောင်း၊ အချိုရည်များ၊ ပေါင်မုန့်၊ နွားနို့ စသည်တို့ကို စားပြီးတိုင်းမှာ သွားသန့်ရှင်းရေး ကောင်းစွာမပြုလုပ်မိပါက သွားပိုးစားစေတတ်ပါတယ်။
● အဆိုပါအစားအစာများဟာ တံတွေး၊ အက်ဆစ်၊ ဘက်တီးရီးရီးယား အစရှိသည်တို့နှင့် ပေါင်းစပ်ရာကနေ သွားပေါ်မှာ သွားချေးဖတ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။အချိန်ကြာတာနှင့်အမျှ ဘက်တီးရီးယားများကနေထွက်တဲ့ အက်ဆစ်တွေဟာ သွားအပေါ်ယံမျက်နှာပြင်ကို တိုက်စားခြင်းဖြင့် ပိုမိုကြီးမားတဲ့ သွားပိုးပေါက်တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
>> သွားပိုးစားခြင်းဖြစ်စေဖို့ အလားအလာပိုများတဲ့ ကလေးငယ်များကတော့ -
● ခံတွင်းမှာ သွားပိုးပေါက်ဖြစ်စေမယ့် ဘက်တီးရီးရီးယားများ စုပုံနေသူများ
● အချိုနှင့်ကစီဓာတ် အစားများသူများ
● ရေသောက်နည်းသူများ သို့မဟုတ် ဖလူအိုရိုက်ပါဝင်မှုနည်းသောရေကို သောက်လေ့ရှိသူများ
● တံတွေးအထွက်နည်းသူများ စသည်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
● သွားနာတယ်လို့ ပြောတာမျိုး
● အချိုစာများစားတဲ့အခါ သို့မဟုတ် ပူသော၊ အေးသောအရည်များ သောက်တဲ့အခါ သွားကျဉ်တယ်လို့ ပြောတာမျိုးရှိရင်တော့ သွားထဲမှာ သွားပိုးပေါက်တွေ ရှိနေပါပြီ။
>> သွားပိုးစားပြီး သွားကိုက်နေရင် ...
● ပူလွန်းအေးလွန်းတဲ့ အစားအသောက်များကို မကျွေးပါနဲ့။
● ရေနွေးနွေးလေးထဲ ဆားကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းထည့်ပြီး ပလုတ်ကျင်းပေးတာမျိုး လုပ်ပေးပါ။
● ပါးပေါ်မှာ ရေခဲအိတ်ကပ်ပေးပါ။
● အကိုက်အခဲပျောက်ပြီး အရောင်ကျစေတဲ့ Paracetamol ပါဝင်တဲ့ဆေးရည် (ဥပမာ - Biogesic for kids) တိုက်ပေးလို့ ရပါတယ်။
● တကယ်လို့ ဒီလိုဆေးတိုက်တာတောင် ၂ ရက် - ၃ ရက်နေလို့မှ မသက်သာရင် သွားဆရာဝန်နဲ့ ပြသတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
>> သားသားမီးမီးလေးတွေ သွားပိုးစားခြင်းမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ?
● ကလေး သွားစပေါက်ပြီဆိုတာနှင့် သွား စတင်တိုက်ပေးပါ။ ဖလူအိုရိုဒ် ပါဝင်သော သွားတိုက်ဆေးဖြင့် သွား၊ လျှာနှင့်သွားဖုံးတွေကို တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် တိုက်ပေးပါ။
● အသက် ၃ နှစ်အောက် ကလေးငယ်များအား သွားတိုက်ရာတွင် ဆန်စေ့အရွယ်ပမာဏခန့်ရှိသော သွားတိုက်ဆေးကို သုံးသင့်ပြီး ၃ နှစ်အထက်ကလေးများကိုတော့ ပဲစေ့အရွယ်ပမာဏကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
● အသက် ၂ နှစ်နောက်ပိုင်းကလေးများကိုတော့ သွားကြားထိုးသောချည်မျှင်ကို အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။
● ကလေးအား အချိုများသောအစာများကျွေးခြင်းကို ကန့်သတ်သင့်ပါတယ်။
● နို့ဘူးတိုက်သောကလေးများအား နို့ဘူးအတွင်း အချိုရည်များ ထည့်တိုက်ခြင်း ရှောင်ပါ။
● ကလေးအား သွားဆရာဝန်နှင့်ပြသပြီး သွားသန့်ရှင်းရေး ပုံမှန်လုပ်ပေးပါ။
၃ဝ.၇.၂ဝ၂ဝ | ကလေးမြားနှငျ့ကနျြးမာရေး
ကလေး တဈယောကျနှငျ့တဈယောကျ အိပျစကျခြိနျမတူညီ...
၂၈.၇.၂ဝ၂ဝ | ကလေးမြားနှငျ့ကနျြးမာရေး